प्लेटोनिक लभ : जहाँ यौन र स्वार्थ हुँदैन – CentralKhabar – No 1 Online News Portal from Nepal
प्लेटोनिक लभ : जहाँ यौन र स्वार्थ हुँदैन
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०३:११
के प्रेम जीवनको लागि उत्तम मार्गनिर्देशन हो ? धेरै व्यक्तिहरू यो विश्वास गर्छन् र केहीले प्रेम बिना पनि जीवन सम्भव छ भनेर प्रेरणा जगाउने गर्छन् । प्रेम बहुआयामी हुन्छ र यसको धेरै रूपहरू हुने गर्छ । प्यारेन्टल, फिलिपल, रोमान्टिक र प्लेटोनेटिक मुख्यतया ४ किसिमका प्रेमहरू हुन् । तर जब हामी प्लेटोनेटिक मित्रहरू भेट्छौं वा प्लेटोनेटिक प्रेम को बारेमा कुरा गर्छौं, त्यसको सामु अरू प्रेमहरू फिक्का हुने गर्छन् । एक आधुनिक, स्वस्थ प्लेटोनेटिक सम्बन्ध कस्तो देखिन्छ त्यसबारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं ।
प्लेटोनेटिक प्रेम भनेको के हो ?
प्लेटोनिक प्रेमको नाम प्रख्यात शास्त्रीय ग्रीक दार्शनिक प्लेटोबाट लिइएको हो । प्लेटोले आफ्नो प्रेमको बारेमा परिभाषा लेखेका थिए । त्यतिबेला भोजमा आउने पाहुनाहरूले ईरोसको सम्मानमा भाषण दिएर प्रेमको साँचो अर्थमा बहस गर्ने गरेका थिए । प्रारम्भमा, प्लेटोको संवाद समलिंगी सम्बन्ध, यौन र अन्य विषय तर्फ निर्देशित हुन्थ्यो । तर पुनर्जागरणले प्लेटोनिक प्रेम भन्नाले आजको जस्तो विपरीत लिंगीसँग हुने सम्बन्धहरूलाई समेट्न थालेको छ ।
मूलतः प्लेटोनिक प्रेम भनेको केवल प्रेम थियो, जुन अश्लीयल कुरा थिएन । यसको मतलब यो अभिलाषा वा शारीरिक आवश्यकता पूरा गर्नमा केन्द्रित थियो। यसको सट्टा, यो एक प्रेम थियो जसले अभिजात वर्गको पछि लाग्ने कार्यहरूलाई प्रेरित गर्यो । यसले दुवैको मनमा आनन्द भर्न थाल्यो । स्पष्ट रूपमा आज पनि यो विषयमा स्पष्ट अवधारणा आएको छैन । धर्मनिरपेक्ष संसारमा एक प्लेटोनिक सम्बन्ध मूलतः केवल मित्रहरू सुधार गर्नेु (शून्य लाभहरू) को लागि हो भन्ने चिनिएको छ । प्लेटोनिटिक प्रेम, रोमान्टिक प्रेम जस्तो, गहिरो र गहन हुन सक्छ र जीवनको सबैभन्दा राम्रो यसले लामो मित्रताको आधार बनाउँछ।
प्लेटोनेटिक प्रेमका ३ विशेषताहरू
यसलाई जोड्नको लागि एक सरल तरिका भनेको राम्रो मित्र हुनु र त्यसैमा रोकिनु हो । यद्यपि सामान्य सम्बन्ध बनाउने समय, शक्तिका संरचनाहरू एवं परिवर्तनका आधारहरूको बारेमा धेरैले खोजिरहने उत्तरहरू भने यसमा पाउँदैनन् । प्लेटोनेटिक प्रेमको निम्न तीन विशेषताहरूले तपाईंलाई यो पहिचान गर्न, यसलाई तपाईंको अपेक्षाहरू व्यवस्थापन गर्न र त्यो सम्बन्धलाई आनन्दित र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ।
१. प्लेटोनेटिकले प्रेमले नभएको इमानदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने वा जगाउने काम गर्छ
विशुद्ध प्लेटोनिक सम्बन्धमा छलको व्यवहार निकै थोरै हुन्छ । रोमान्टिक सम्बन्धमा अन्य सम्बन्धमा जस्तो कुनै डर हुँदैन । किनकि यो सम्बन्धमा त्यस्ता व्यक्तिले तपाईंलाई छोड्नेछन् जो पहिले तपाईंको साथमा कहिल्यै थिएनन् । यो खालको प्रेममा सम्मान हुन्छ, सतर्कता हुन्छ र झगडा पनि हुन सक्छ । तपाईंहरूबीच झगडा हुन सक्छ, एक महिनाको लागि बोल्नुहुन्न, तर त्यसपछि फेरि उही सम्बन्ध हुन्छ । तर यो नबोलेको बीचमा पनि प्रेमभने अटूट हुन्छ ।
२. प्लेटोनेटिक प्रेमले बाउन्ड्रीलाई सम्मान गर्छ
जबकि शुद्ध रूपले प्लेटोनेटिक सम्बन्धहरूमा उनीहरूसँग कुनै सम्बन्धलाई सीमामा बाँध्ने प्रयास हुन्छ। किनकि हामी हाम्रा साथीहरूलाई हाम्रा प्रेमिका जस्तै मापदण्डमा राख्छौं । समय बित्दै जाँदा तपाईंको सम्बन्धका सीमाहरू कति टाढासम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा महत्वपू्र्ण हुन्छ ।
‍३ प्लेटोनेटिक प्रेमको कुनै आशा हुँदैन
यद्यपि मित्रता दिने र लिने एक साझेदारी हो । जब यो प्लेटोनेटिक प्रेमको कुरा आउँदछ, तपाईं नियमित मित्रताको भन्दा त्यस व्यक्तिको बढी अपेक्षा वा माग नगर्न होसियार हुनुपर्छ।
रोमान्टिक प्रेम र प्लेटोनिक प्रेमबीचको भिन्नता भनेको आशामा हुन्छ । हामी हाम्रा रोमान्टिक साझेदारहरूबाट धेरै आशा गर्छौं किनकि प्रत्येक व्यक्तिसँग तपाईंको डेटिङ, सम्भाव्य रूपमा जीवनसाथीको रूपमा लिएको हुन्छ ।
४ . प्लेटोनिक प्रेम निस्वार्थ हुन्छ
रोमान्टिक प्रेम आंशिक रूपमा स्वार्थी हुन्छ। यसले सम्पूर्णको साझेदारहरूको लागि के उत्तम हो र के गलत हो भन्ने चाहन्छ रु विवाह वा अन्य प्रतिबद्ध सम्बन्धहरू कहिलेकाँही हामीले त्यस्तो तरिकाले व्यवहार गर्नु आवश्यक हुन्छ जुन हामीले अन्यथा व्यवहार गर्न सक्दैनौं। यी कार्यहरू सतहमा निःस्वार्थ देखिन्छ किनभने तपाईं आफ्नो साथीको फाइदाको लागि केही गर्न सक्नुहुन्छ। तर नजिक हेर्नुहोस् र सोच्नुहोस् कि तिनीहरू स्वार्थी छन् कि भावनामा सद्भाव कायम राख्न र सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत गर्छ ।
सेन्ट्रल डेस्क 1934 posts0comments
टन्सिलमा कस्तो खानपान हुनुपर्छ ?
सुरुङमार्ग र पहुँचमार्गमा करिब २२ अर्ब खर्च गरिँदैछ